करीनाले यस्तो मास्क लगाउँछिन् जसको मूल्य सुनेर तपाईको होस् उड्छ !! – Dailny NpNews
करीनाले यस्तो मास्क लगाउँछिन् जसको मूल्य सुनेर तपाईको होस् उड्छ !!
प्रकाशित मिति: बिहिबार, चैत्र २६, २०७७ समय: २०:३६:३६
एजेन्सी, २६ चैत्र । वलिउडमा एक पछि अर्को गर्दै सेलिव्रेटीहरु कोरोना पोजेटिभ हुँदैछन् । यसवाट वाँकी सेलिवे्रटिहरुमा डर पैदा गरेको छ । यस्तोमा सेलिव्रेटिहरुले कारोनाका गाइडलाईन राम्रोसँग ध्यान दिनु आवस्यक छ ।
हालै एक्ट्रेस करीना कपुर खानले पनि सोशल मिडिया मार्फत फ्यानहरुलाई अपिल गरेकी छिन् । तर करीना आफ्नो मास्कलाई लिएर चर्चामा आईन् । जसको मुल्य साँचै हैरान गर्ने खालको छ ।
करीना कपुरले हालैमा एक मास्क लगाएको आफ्नो फोटो शेयर गरेकि छिन् । फोटोमा करीनाले कालो रङ्गको मास्क लगाएकी छिन् र आफ्नो फ्यानलाई पनि यस्तै गर्न भनिएको छ । फोटोको साथ करीनाले यो कुनै प्रोपोगाण्डा होईन, कृपया आफ्नो मास्क लगाउनु होला भनेकी छिन् ।
फोटोमा करीनाले लगाएको व्ल्याक मास्क मुल्य सस्तो चैं छैन । मास्कमा सेतो कलरको स्ट सिंवल पनि छ । उक्त मास्क एक सिल्क पाउचको साथ आउँछ । उक्त व्राण्डको मुल्य वेवसाईटमा ३५५ डलर छ । नेपाली मुल्य रु. ४१,६०० पर्न आउँछ । यस्तो महँगो मास्क देखेर जो सुकैको पनि होस उड्न सक्छ नी ।
३९७ पटक हेरिएको